Martida Makrafoonka, 01 January 2018
Isniin 1 January 2018
Barnaamijka Martiada Makarafoonka
Barnaamijka Martiada Makarafoonka ee todobaadkan waxaa marti u ah Axmed Yuusuf Gool Cadde oo ka tirsan qaybta maamulka ee Jaamacadda Hargeysa.
Barnaamijka Martida Makrafoonka: Xaliima Yareey
Barnaamijka Martida Makrafoonka wuxuu todobaadkan ku saabsanyahay, hiigsiga 2020-ka ee doorashooyinka Soomaaliya oo la rajeynayo in ay shacabka soo dooran doonaan madaxda dalka.
Barnaamijka Martida Mikrofoonka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay xaaladda cusub ee ay gashay magaalada Qudus, ka dib markii Madaxweynaha Maraykanka D. Trump uu u aqoonsaday magaalo madaxda Israel
Barnaamijka todobaadkan waxaa marti u ah Naasir Maxamed Cali, Agaasimaha Machadka diraasaadka xallinta khilaafaadka ee Jaamacadda Hargeysa.
Barnaamijka Martida Mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi (Baadiyow), waxaana soo jeedinaya wariyaha VOA-da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Ku soo dhawaada barnaamijka Martida Makrafoonka. Maxamed Cabdi Xasan (Sandheere) ayaa soo jeedinaya.
Dhageyso Barnaamijka Martida Makrafoonka, waxa toddobaadkan soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Ku soo dhawaada barnaamijka Martida Makrafoonka oo aad Sabtida ka dhageysataan VOA. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa soo jeedinaya.
Barnaamijka Martida Mikrofoonka waxaa marti ku ah Cabdiqaadir Cabdi Xaashi oo bartay xiriirka caalamiga ah, horayna Wasiirka Waxbarashada uga soo noqday Dawladda Federaalka ee Somalia.
Martida: Xildh. Cabdullaahi Y. Xasan (Alankey)
Barnaamijka Martida Mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Xasan (Alankey) oo ka mid xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Gedo, waxaana uu ka jawaabayaa duqeymaha dhibta geysta ee ka dhaca deegaanadaas.
Barnaamijka Martida Mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Wasiirka Duulista Hawada ee D. F. Somalia, Maxamed A. Salaad (Oomaar), waxana uu ka jawaabayaa su'aalo ku saabsan soo wareejinta maamulka hawada Somalia
Dhageyso, Barnaamika Martida Makaroofnka
Barnaamijka martida waxa uu ku saabsan yahay, wareejintii Qalbi-dhagax